က Man ၏ကျွန်းဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ Protected
က Man Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ၏ကျွန်း
က Man Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ၏တစ်ဦးကျွန်းရှယ်ယာများကန့်အသတ်တစ်ခုတည်းဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ အစုရှယ်ယာများကန့်အသတ်ပုံမှန်ကုမ္ပဏီအကြားကွာခြားချက်ဟာကျုံ့သွားစေပါတယ် "ဆဲလ်" သို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေပိုင်ဆိုင်မှု, liabilities နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဝေစုအတန်းခွဲခြားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ (ထို "Core" ဟုခေါ်) ကိုအဓိကကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်း၎င်း၏ဆဲလ်ကနေကွဲကွာနေသည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံး 2004 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒေကျွန်းက Man ၏ Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီများကသူတို့အာမခံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာလုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကြောင့်သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏အလားအလာရန်, မြောက်မြားစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအုပ်စုများပညတ္တိကျမ်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့တစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ခွင့်ပြု 2006 အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီများ (စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝ) စည်းမျဉ်းများ 2010 အတွက်ဖန်တီးထားကြသည်။
ဥပမာ, ကျုံ့သွားစေပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်များတွင်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကိုင်ဖို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်ပြီးတာနဲ့ UK မှာအစစ်အမှန်ဂုဏ်သတ္တိကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဆဲလ်ကမ္ဘာတဝှမ်း moored ရေယာဉ်များပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။ တစ်ဦးကတတိယဆဲလ်ပေါင်းများစွာကုမ္ပဏီတွေကော်ပိုရေးရှင်း၏ရှယ်ယာကိုင်နိုင်ဘူး။ တစ်ဦးကစတုတ္ထဆဲလ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်စည်နှင့်လုံခြုံရေးကိုင်နိုင်ဘူး။
က Man ၏ကျွန်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနီးရှိအိုငျးရစျပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဗြိတိသျှသရဖူမှီခိုမှုဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ် Tynwald လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ခုအိမ်သူအိမ်သားရွေးကောက်တင်မြှောက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့်အတူဒီမိုကရေစီပါလီမန်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
က Man Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ၏တစ်ဦးကျွန်းတွင်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
• စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားတွေဟာကျုံ့သွားစေပါတယ်၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: က Man မျှအခွန်ပေးဆောင်၏ကျွန်းအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝငျမဟုတ်နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့။ သို့သော်အမေရိကန်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်အခြားသူများကိုသူတို့၏အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်များ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းဘယ်တော့မှနေကြသည်။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စီးပွားရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို, ရှယ်ယာရှင်များ, ကုမ္ပဏီများ, အမျိုးအစားများများအတွက်ဆဲလ်တွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
• အောက်ပိုင်းအန္တရာယ်များ: လွတ်လပ်သောနှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားဆဲလ်သည်အခြားဆဲလ်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူမည်သည့် liabilities ကနေဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးလိုအပ်သည်။
• အနိမ့် Authorized Capital ကိုအဘယ်သူမျှမ: နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• လွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းခြင်း: အလွန်နည်းပါးစာရွက်စာတမ်းများသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းရေးအဘို့လိုအပ်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှသရဖူမှီခိုမှုအင်္ဂလိပ်ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများတဦးတည်းဖြစ်သကဲ့သို့။
Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အမည်
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်စကားလုံးများကို "Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ" နဲ့သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "ကျုံ့သွားစေပါတယ်" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
အဓိကကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် "ယေဘုယျ" ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထို့နောက်အခြားသူများထံမှလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ရသောတစ်ဦးသို့မဟုတ်မြောက်မြားစွာဆဲလ်တွေဖန်တီးပေးပါတယ်။
ပညတ္တိကျမ်းရှိသမျှဆဲလ်သည်အခြားဆဲလ်များ၏ liabilities မှသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့လက်စွပ်ကိုခြံစည်းရိုးဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းကတည်းကကြောင့်အခြားဆဲလ်များကိုမ bearing ရှိပါတယ်ပါဘူးဘာနဲ့အခြားဆဲလ်ကနေလွတ်လပ်စွာင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တစ်ခုတည်းကလာပ်စည်း၏လက်စွပ်ခြံစည်းရိုးအတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသာဆဲလ်ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များမှလက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က "ဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုများကို" ဟုခေါ်ကြသည်။ အခြားဆဲလ် '' ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အကြွေးအခြားဆဲလ်များကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိအခွင့်အရေးများမဟုတ်သလိုပြန်လည်ကုရှိသည်။
အဆိုပါ Core ၏အထွေထွေပိုင်ဆိုင်မှုများကို "Non-ဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုများကို" ဟုခေါ်ကြသည်နှင့်တတိယပါတီများမှစာချုပ်ချုပ်ဖို့ကဲ့သို့သောဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဆဲလ်မဆိုမှဆက်စပ်နေကြသည်မဟုတ်သောကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ liabilities တစ်ခုတည်းကိုသာအဆိုပါကျုံ့သွားစေပါတယ်၏တာဝန်ယူမှုနှင့်မယင်း၏ဆဲလ်မဆိုရှိပါတယ်။
တိုင်းကျုံ့သွားစေပါတယ်ယင်း၏သက်သေပြဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုထံမှသီးခြားယင်း၏ Non-ဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစောင့်ရှောက်ရပေမည်။ co-စပ်လျဉ်းတားမြစ်သည်။
•မူလတန်းခံထိုက်ပေဆဲလ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ liabilities ဆပ်ဖို့မလုံလောက်ပါက, ကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ Non-ဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုဒုတိယအထိုက်ဖြစ်လာလိမ့်မည် နှင့်
အကြွေးနှင့်မဆိုကြွေးရှင်ခိုင်လုံသောပြောဆိုချက်ကိုရှိပါတယ်ရှိမရှိပမာဏကိုအပါအဝင် liabilities နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အငြင်းပွားမှု, ကျုံ့သွားစေပါတယ်အငြင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့ကြေငြာဘို့က Man တရားရုံးများ၏ကျွန်းအယူခံလွှာတင်ရေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အစုရှယ်ယာများကန့်အသတ်မှသာလျှင်ကုမ္ပဏီများကျုံ့သွားစေပါတယ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီ။ ဒါကမျက်နှာကျက်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်ရှယ်ယာအရေအတွက်ကန့်သတ်ထူထောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဖြစ်ဖြည့်ဆည်းရန်ခက်ခဲခွအေနအေမဟုတ်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းခြင်းအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါလျှောက်ထားသူကိုသာအောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်:
1 ။ အသစ်တစ်ဦးကျုံ့သွားစေပါတယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခံရဖို့, အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာရှင်းလင်းစွာကကျုံ့သွားစေပါတယ်ကြောင်းကြေညာရမည်, သို့မဟုတ်
2 ။ ရှိပြီးသားကုမ္ပဏီတစ်ခုကျုံ့သွားစေပါတယ်သို့ကူးပြောင်းမှုအတွက်ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင် ( "မှတ်ပုံတင်") မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်လျှောက်လွှာများအသင်းနှင့်အသင်းသစ်ကိုဆောင်းပါးများတစ်ခုပြင်ဆင်စာချွန်လွှာနှင့်အတူလိုက်ပါသွားရမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းနေကြသည်တပြိုင်နက်, မှတ်ပုံတင်ကူးပြောင်းခြင်း၏လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
မဆိုကျုံ့သွားစေပါတယ် "ဆဲလ်အစုရှယ်ယာ" ဟုခေါ်သည့်သီးခြားဆဲလ်မဆိုဘို့ရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆဲလ်ရှယ်ယာရောင်းချခြင်းမှအရရှိသောသီးခြားဆဲလ်တစ်ခုတည်းကိုသာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ကျုံ့သွားစေပါတယ်ယင်း၏ကော်ပိုရိတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်စားဘို့ရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်ပြီးအားလုံးရရှိသောတစ်ခုတည်းကိုသာ Non-ဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ 2006 အက်ဥပဒေကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အကြိုးအတှကျကုမ္ပဏီအကြွေးတင်ဘို့ကိုတိုက်ရိုက်မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာရန်အဖြစ် "ဖြန့်ဖြူး" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဤသည်ခွဲဝေသို့မဟုတ်ရွေးနှုတ်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာဝယ်ယူများ၏ငွေပေးချေမှုပါဝင်သည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်အတွက်ဖြန့်ဖြူးပြီးနောက်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကျေနပ်မှုလျှင်တစ်ဦးကကျုံ့သွားစေပါတယ်ရဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကလာပ်စည်း ( "ဆယ်လူလာဖြန့်ဖြူး") ကဖြန့်ဖြူးခွင့်ပြုရန်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ solvency စမ်းသပ်မှုသည်:
1 ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှန်သင်တန်းမှာတော့ကုမ္ပဏီသောအခါအမှုကြောင့်အားလုံးအကြွေးတွေဆပ်ဖို့တတ်နိုင်တော်မူ၏ နှင့်
2 ။ ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးစုစုပေါင်း liabilities ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဒါရိုက်တာများစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပြုမူရပါမည်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကျေပွန်သည်။ ဒါရိုက်တာဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုထဲကနေခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းစွာတိုင်းဆဲလ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်းရန် Non-ဆယ်လူလာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစောင့်ရှောက်ရပေမည်။
က Man ၏ကျွန်းအတွင်းပိုင်း commerce ကိုမဆိုအမျိုးအစားအတွက်ဆက်ဆံမပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များအဖြစ်က Man နေထိုင်သူများမရှိကျွန်းနှင့်အတူကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအားလုံးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဒါရိုက်တာကအတည်ပြုထားတဲ့နှစ်ပတ်လည်ပြန်လာ file ရမည်ဖြစ်သည်။
ချိန်ခွင်စာရွက်,2န်ထမ်းထက်လျော့နည်းရှိခြင်းလျော့နည်းသန်း3ထက် GBP နှင့် 50 သန်းပေါင်ထက်လျော့နည်း၏နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: အဘယ်သူမျှမစာရင်းစစ်တွင်အောက်ပါ 2.8 စံထဲက 5.6 ရှိခြင်းတစ်ကျုံ့သွားစေပါတယ်ဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများက Man ၏ကျွန်းများတွင်ရရှိနိုင်မရှိကြပေ။
က Man Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) နိဂုံးတစ်ခုကျွန်းကနေ
တစ်ဦးက Man ၏ကျွန်း Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်: စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုအဘယ်သူမျှမအခွန်အခများ, privacy ကို, ဆဲလ်များအတွက်အောက်ပိုင်းအန္တရာယ်များ, စီးပွားရေးပို့ချဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးမျှနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လွယ်ကူသောဖွဲ့စည်းရေး, အင်္ဂလိပ်များထဲမှ ယင်း၏အရာရှိတဦးကဘာသာစကားများ။